Thursday October 27, 2016 - 11:06:00 in Sports by Super Admin
Sakho ayaa loo masaafuriyay kooxda Liverpool ee da’ooda ka hooseyso 23 sanno jirada tan iyo markii uu habdhaqankiisa kaga careysiiyay tababare Klopp, waxaana uu garwaaqsaday inay qasab ku tahay inuu baxo bisha Janaayo si uu waayihiisa ciyaareed dib u soo kiciyo sida ay qortay Daily Mirror.
Lille ayaa xiiseyneysa laakiin mushaharka 100ka kun ginni ee isbuucii qaato Sakho ayaa caqabad ku noqon kara, waxaana macquul ah inay Liverpool qeyb ka bixiso mushaharkiisa haddii uu amaah ku baxo.
Klopp ayaa markii hore sababo dishibiliin xagaagii kooxda uga saaray daafaca Faransiiska oo 18 milyan ginni uga soo wareegay PSG sannadii 2013.
Sakho oo 26 sanno jir ah ayaa ka sii careysiiyay Klopp markii uu diiday maalintii ugu danbeysay ee suuqa kala iibsiga inuu amaah ugu biiro Stoke City, waxaa u sii dheereyd cabasho uu Snapchat soo dhigay oo uu ku sheegay inuusan aqbali karin beenta laga sheegayo.
Klopp ayaa ku ciqaabay Sakho inuu tababar la qaado kooxda da’dooda ka hooseysa 23 sanno, waxaana daafaca dhexe uu ugu danbeyn aqbalay inaysan jirin hab uu ugu soo laaban karo kooxda koowaad inta uu joogo tababaraha Jarmalka.
Sakho oo heshiis shan sanno ah u saxiixay kooxda Anfield ka dhisan 13 bilood ka hor ayaan u ciyaarin Liverpool tan iyo markii uu shabaqa soo taabtay kulankii ay 4-0 kaga badiyeen Everton bishii April.